Diiwaan-Gelinta Musharaxiinta Xilka Madaxweynaha Oo Maanta Lasoo Gaba-Gabeynayo. – STAR FM SOMALIA
Guddiga isku dhafka ah labada aqal ee doorashada Madaxweynaha ayaa Maanta oo talaado ah soo gaba-gabeynaya diiwaan-gelinta Musharaxiinta u tartameysa doorashada xilka Madaxweynaha 10-aad ee dowladda Federaalka Soomaaliya.
Guddiga ayaa sidoo kale Maanta diiwaan-gelinaya Musharaxiin kale oo dooneysa inay u tartamaan doorashada dhaceysa, 15 may.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra’iisul Wasaareyaal hore iyo siyaasiyiin kale oo farabadan ayey Guddiga doorashada u diiwaan-geliyeen tartanka doorashada Madaxweynaha.
15-ka bishaan May 2022 ayaa lagu wadaa in Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka gaar ahaan Teendhada Afisyooni ka dhacdo doorashada Madaxweynaha 10-aad ee dowladda Federaalka Soomaaliya, waxaana socda olole doorasho oo ay wadaan Musharaxiinta Madaxweynaha.